SEX VIRUS မကူးဆက်ရအောင် ~ ကျိုက္ခမီသားလင်းနိုင်ဦး
SEX VIRUS မကူးဆက်ရအောင်
ကျိုက္ခမီသား လင်းနိုင်ဦး Thursday, March 17, 2016 FacebookSecurity No comments
facebookအသုံးပြုတဲ့တချို့user account​တွေမှာဆိုရင်​ Porn virus ကူးစက်​ခံရပြီး​တော့sexy post​တွေအဖြစ်​နဲ့အဲ့ဒိအ​ကောင့်​န်​ဟာမိမိရဲ့friends​တွေ၊မိမိဝင်​ထားတဲ့group​တွေထဲကိုpornographic video ဖိုင်​​တွေအဖြစ်​၊အဲ့ဒိvirusအဖြစ်​နဲ့ဖန်​တီးထားတဲ့videoဖိုင်​​တွေဟာvirus automatically attache ဖြစ်​ကာ၊မိမိမတင်​ပဲနဲ့အလိုအ​လျောက်​sharedမိခြင်း၊statusပို့စ်​တင်​မိခြင်း၊မိမိဝင်​ထားတဲ့group​တွေpage​တွေရဲ့comment​တွေထဲမှာလည်းဝင်​၍shareမိခြင်း၊​များစတာ​တွေဖြစ်​​ပေါ်​စေပြီး circulating ပုံစံနဲ့အဲ့ဒိ pornographic videoဖိုင်​​တွေဟာအဆင့်​ဆင့်​ပျံ့နှံ့သွား​စေနိုင်​ပါတယ်​–အဲ့ဒိလိုမျိုးvirusအကူးစက်​မခံရ​စေဖို့အတွက်​facebookအသုံးပြုသူဟာfb​ပေါ်မှာ​တွေ့တဲ့sexy videoများ၊မသင်္ကာဖွယ်​ရာ​လို့ယူဆရတဲ့လင့်​ခ်​နဲ့ပုံများ၊applicationများ၊ဥပမာ-” ‘watch this video if you’re curious’မင်းထူးဆန်းတာ​တွေ့ချင်​ရင်​ဒီဗွီဒီယိုကိုကြည့်​ပါဒီလင့်​ခ်​ကိုနှိပ်​ပြီးsingupလုပ်​ရင်​likeအများကြီးရမယ်​၊အထူးအဆန်း​တွေ့မယ်​၊ဘာရမယ်​ညာရမယ်​စသဖြင့်​၊မက်​လုံး​ပေးတဲ့စာနဲ့အတူvideo၊photo၊apk၊files၊fake websiteများ၊စတဲ့ကိုယ်​နဲ့ရင်းနှီးအကျွမ်းတဝင်​မရှိတဲ့လင့်​ခ်​များကိုနှိပ်​မဝင်​မိ​စေဖို့နဲ့လင့်​ခ်​ရဲ့URL info​တွေကိုလည်းသတိထားဂရုပြုရမှာဖြစ်​ပါတယ်​–တကယ်​လို့virusမိထားလို့မိမိအ​ကောင့်​န်​ကိုinfected ဖြစ်​​နေခဲ့ရင်​​အောက်​ကအဆင့်​အတိုင်းပြုလုပ်​​ဆောင်​ရွက်​ခြင်းဖြင့်​ကာကွယ်​နိုင်​ပါတယ်…​
၁။ မိမိfbအ​ကောင့်​န်​ကိုloginဝင်​၍news feeds​ရောက်​ရင်​အ​ပေါ်ကမျဉ်းသုံး​ကြောင်းပုံနဲ့menu tab​နေရာကိုနှိပ်​ပါ။
၂။ Acconut Settings​နေရာကိုနှိပ်​ဝင်​လိုက်​ပါ။
၃။ Privacy ထဲကိုထပ်​နှိပ်​ဝင်​ပါ။
၄။ ပြီးရင်​အောက်​ဆုံးကစာ​ကြောင်းဖြစ်​တဲ့Do you want other search engines tolink to your timeline?ဆိုတဲ့စာ​ကြောင်းပါတဲ့boxအကွက်​​နေရာ​လေးကိုနှိပ်​ဝင်​လိုက်​ပါ။
၅။ ပြီးရင်​​နောက်​တမျက်​နှာမှာ​အောက်​ဆုံးနားကLet other search engines link toyour timeline စာသား​ဘေးနားကအမှန်​ခြစ်​ကိုနှိပ်​ပြီး၊ဖြုတ်​လိုက်​ပါ။
၆။​ နောက်​တမျက်​​ရောက်​ရင်​Are you sure you want to disablepublic search စာသား​အောက်​မှာ​တွေ့တဲ့အပြာ​ရောင်​buttonနဲ့Confirmစာသား​နေရာကိုထပ်​နှိပ်​​ပေးလိုက်​ပါ။ပြီးရင်​backတချက်​ပြန်​ဆုတ်​လိုက်​ပါ။
၇။ Do you want other search engines tolink to your timeline? ဆိုတဲ့​နေရာမှာNo ဆိုပြီး​တော့ဖြစ်​​နေရပါမယ်​။backပြန်​ထွက်​ပါ။
၈။ Account Settings ​နေရာကိုတခါထပ်​ဝင်​ပါ။
၉။​ နောက်​တမျက်​နှာ​ရောက်​ရင်​ကိုးခု​မြောက်​​နေရာကApps ​နေရာကိုနှိပ်​ပြီးဝင်​လိုက်​ပါ။
၁၀။ အ​ပေါ်ဆုံးကLogged in with Facebookဆိုတဲ့​နေရာကိုနှိပ်​ဝင်​လိုက်​ပါ။
၁၂။​ အောက်​ဆုံးကRemove app​နေရာကိုနှိပ်​ပါ။
၁၄။ မိမိအ​ကောင့်​န်​က​နေတဆင့်​အလိုအ​လျောက်​auto spamပုံစံဖြစ်​ပြီးstatusတင်​မိတာ၊tagတွဲမိတာ၊group​တွေpage​တွေမှာpostတင်​၊comment​ရေးမိတာမျိုး​တွေ၊virus automatically attacheဖြစ်​​နေတာ​မျိုး​တွေရှိ/မရှိ၊ဖြစ်​မဖြစ်​၊ပြန်​လည်​စိစစ်​ဖို့အတွက်​-Activity Log​ စာသား​နေရာကိုနှိပ်​ဝင်​ပါ။
၁၅။ အဲ့ဒိactivity log​နေရာမှာမိမိပြုလုပ်​ခဲ့တဲ့post​တွေ၊tag​တွေ၊comment​တွေshare၊like စတာ​တွေ​တွေ့မြင်​ရပါမယ်​။အ​ပေါ်ကfilter ​နေရာကိုနှိပ်​ပြီး​တော့လည်းကဏ္ဍတစ်​ခုခြင်းစီအလိုက်​ post၊photo၊tag၊group၊comment၊စသဖြင့်​ကဏ္ဍအလိုက်​သီးသန့်​ခွဲထုတ်​၍ကဏ္ဍတစ်​ခုခြင်းစီမှာ​တွေ့ရတဲ့sexy virusနဲ့ပက်​သက်​တဲ့လင့်​ခ်​​တွေ၊post​တွေ၊comment​တွေ၊tag​တွေကိုdeleteလုပ်​၍ဖျက်​ထုတ်​​ပေးပါ။ဒါဆိုfacebook virusကူးစက်​ခံရခြင်းမှလွတ်​​မြောက်​နိုင်​ပြီလို့ယူဆရမှာပဲဖြစ်​ပါတယ်​။-တကယ်​လို့မိမိဟာvirusလင့်​ခ်​တစ်​ခုခုကိုနှိပ်​မိ၍ဖန်​တီးထားတဲ့fake websiteတစ်​ခုခုထဲသို့ဝင်​​ရောက်​မိပြီး၊သူတို့fakeလုပ်​ထားတဲ့web pageမှာfbအ​ကောင့်​န်​ကိုloginဝင်​ခဲ့မိလို့မိမိအ​ကောင့်​န်​လုံခြုံ​ရေးအတွက်​သံသယတစ်​စုံတရာရှိခဲ့ပါက……….
-မိမိfacebook passwordကိုချိန်းလိုက်​ပါ။-ပြီးရင်​facebookလုပ်​ထားတဲ့gmailကိုပြန်​ချိန်းပါ။-facebookလုပ်​တဲ့gmailကိုဖုန်းနံပါတ်​ထား၍အနည်းဆုံး2stepခံထား​ပေးပါ။ပြီးရင်​-fb infoထဲဝင်​၍fbလုပ်​ထားတဲ့mailကိုhideလုပ်​ပါ။-facebookကိုဖုန်းနံပါတ်​ခံ၍loggin approvalscodesခံထား​ပေးပြီးonထားလိုက်​ပါ။fbအ​ကောင့်​န်​ကိုloginဝင်​တိုင်းfbကsmsကိုloggin approvals codeကုဒ်​ပို့​ပေးမယ့်​စနစ်​ဖြစ်​ပါတယ်​။
(Account Settingsထဲဝင်​၊Securityထဲဝင်​၍၊Logging Approvals On​နေရာအမှတ်​ခြစ်​၍လက်​ရှိသုံး​နေတဲ့ဖုန်းနံပါတ်​ခံကာOn​ပေးထားရမှာဖြစ်​ပါတယ်​။)-ပြီး​တော့3trusted friendsနည်းကိုသုံးပြီးမိမိရဲ့အရင်းနှီးဆုံး၊online​ပေါ်မှာအရှိနိုင်​ဆုံးသူငယ်​ချင်းfriendsသုံး​ယောက်​ကိုinviteလုပ်​ထားသင့်​ပါတယ်​။
(မိမိအ​ကောင့်​န်​hackedခံရပါက၎င်းသူငယ်​ချင်းသုံး​ယောက်​နာမည်​ကို​ရွေး​ပေးခြင်းဖြင့်​fbမှပို့တဲ့confirm codeကို၊friendsသုံး​ယောက်​ဆီမှပြန်​လည်​​တောင်းယူပြီးမိမိအ​ကောင့်​န်​ကိုconfirmလုပ်​၍ပြန်​လည်​logginဝင်​​ရောက်​အသုံးပြုနိုင်​မှာဖြစ်​ပါတယ်​)-Google Authenticatorလိုapkမျိုး၊Authy လိုapkမျိုးကိုအသုံးပြု၍security codeများ၊code generator များပြုလုပ်​ထားသင့်​​ပါ​ကြောင်း​ရေးသားနိဂုန်းချုပ်​၍အဆုံးသတ်​လိုက်​ပါတယ်​။
Credit to http://hkkkkk4.blogspot.com